Mayelana Nathi - Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd.
I-Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd yinkampani enamandla obuchwepheshe aqinile kanye nebhizinisi lesimanje elihlanganisa umklamo, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nenkonzo. Ineqembu elisebenza kahle, eliqeqeshiwe nelincomekayo. IDaYang yasungulwa ngo-2009, etholakala esifundazweni saseHebei. I-DaYang igxile ekucwaningeni ngokukhiqiza nokusabalalisa ugwayi njenge-Cigarette Capsule, i-Capsule Pusher, i-Herb Grinder, i-Smoking Rolling Paper, i-Hookah nokunye.Kusukela ngo-2009, inkampani ibiqala ukudayisa kwamanye amazwe, okwamanje amakhasimende avela emhlabeni wonke.
Ukuthembela kusayensi nobuchwepheshe ekuthuthukisweni kanye nokuhlinzeka abasebenzisi njalo ngemikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu egculisayo kuwumsebenzi wethu njalo. Namathela esimweni sengqondo nenqubomgomo "eyakhangayo, engokoqobo, eqinile futhi ebumbene," hlola njalo futhi usungula izinto ezintsha, thatha ubuchwepheshe njengomgogodla, bheka ikhwalithi njengempilo, bheka amakhasimende njengoNkulunkulu, unikeze amakhasimende ngenhliziyo yonke imikhiqizo eyanelisa kakhulu kanye nenkonzo enhle kakhulu. , ukuze uzuze ukwethenjwa kwamakhasimende nokubambisana kwesikhathi eside!Ngaso leso sikhathi, sihlala sinemikhiqizo emisha engu-3-5 esohlwini lwanyanga zonke, uzothola iningi lemikhiqizo oyifunayo lapha ezimbonini ezifanayo. I-DaYang ihlala isekelwe kumgomo othi "ikhasimende kuqala, ikhwalithi kuqala", sisungule uhlelo oluqinile lokuhlola izinga elijwayelekile kuwo wonke amaketanga okukhiqiza, umgomo omkhulu uwukuthuthukisa imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu kumakhasimende.
Njengamanje, imikhiqizo yethu ithunyelwe eYurophu, Middle East, Southeast Asia, United States, Latin America, South America, Australia nakwamanye amazwe kanye nezifunda.Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu noma ufuna ukuba umlingani omusha le mboni, sicela usithinte ngaphandle kokungabaza, sifisa ukufinyelela ukubambisana nawo wonke umuntu. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ngenkathi sinikeza abanye amathuba, silwela namathuba ngokwethu. Sizoba uzakwethu waseShayina ozokwenza uziqhenye , futhi senza imizamo yokukunikeza ngenkonzo yobungcweti nangesikhathi esifanele. Bheka phambili ekusunguleni ukholo oluhle futhi ubuhlobo obunobungane nawe.